Buugga SHIICADA Caqiidadeeda iyo Sooyaalkeedii Geeska Afrika |
Cabdijabaar Sh. Axmed — July 9, 2019
Waa waajib ina wada saran inaan ilaalsano diinteenna, haddii taa la waayo waxaa adkaani karayso jiritaanka dadnimadeenna.
Marka horre waxaan mahad balaaran u jeedinayaa qoraagga wakhtigiisa ku bixiyey siddii uu usoo saari lahaa buugg-yarahaan oo dhinacyo badan ka tilmaamaayo caqiidada rasmiga ah ee shiicada iyo sooyaalkooda geeska Afrika. Waxaan in badan ka arki jiray TV-yada ayadoo laga hadlaayo Muslimiinta sunniga iyo shiicada, xaqiiqdii ma aanan fahmin ujeedooyinka rasmiga ah, madamaa aan islahaa waa dad wada sheeganaayo Muslimiin hadana maxaa kala qeybiyay.
Ogaanshaha taariikhda iyo caqiidada shiicadu waxay noqdeen xilliyadan dambe lama huraan marka la eego aqoonta yar ee ay ummadda Muslimka ahi u leedahay, gaar ahaan bulsho-weynta Soomaaliyeed. Sidoo kale, faafitaanka xawliga ku socda ee caqiidada iyo siyaasadda shiicada, kuwaasoo ku fidaya xoog iyo xeelba, ayna daadihinayaan dawlad, waa Iiraane iyo shacabkeedii oo isku duuban, waxay u baahan yihiin baraarug iyo feejignaan ilaa heer ummadeed ah.
Buuggaan aqriskiisa markii aan dhammeeyay waxaan dareemay inaan aqoon rasmi ah u yeeshay shiicada iyo waxa ay ka damacsan yihiin Muslimiinta. Waxaana shaki ku jirin siyaasada guud ee caalamka maanta waa mid ku saleysan dan-wadaag iyo isgaashaan-buureysi fikradeed iyo mid dhaqaale. Waxaad arkaysaa dowlado aan isku qaarad ahayn ay leeyihiin heshiis guud.
Waxaan shaki ku jirin inay muhiim tahay in umadeenna iyo caruurteenna la baro aragtida shiicada iyo halka ay ka timid, sidoo kale manhajka dalkeenna waa innuu noqdaa mid bad-baadiya jiilka soo koraayo iyo kuwa hadda awooda leh intaba. Buuggaan ayaa in badan iftiimiyey taariikhda soo jireenka ah ee faafinta diinta shiicada.
Qoraagga buuggaan ayaa isku dayey innuu wax ka bidhaamiyo jawaabaha weydiimahan soo socda:
Waa maxay sooyaalka shiicada?
Maxay bulshada shiicada ahi rumeysan yihiin?
Waa siddee qaab-dhaqankooda siyaasadeed iyo midka diineed ee ay dadka Muslimiinta, sunniga ah kula dhaqanto?
Ma jiraa wax xog ah oo la cuskan karo oo muujineysa jiritaankoodii Geeska Afrika iyo Soomaaliya?
Buuggaan ayaa noo tilmaamayo cilmi-baaris la sameeyey, si jawaab loogu helo isweydiimaha kor ku xusan waxay soo bandhigeysaa taariikhda madow iyo caqiidada silloon ee kooxda shiicada. Sidoo kale, qorshaha dahsoon ee ay dawladda shiicada ee Iiraan u degsatey siddii ay u shiiceyn laheyd bulshada Muslimiinta, Sunniga ah. Dhanka kalena, dibindaabyada sir iyo saaqba leh ee ay ka dhexwaddo Muslimiinta. Waxa kale oo ay qomooyinka buuggaan wax ka tilmaameysaa sooyaalkii shiicada ee Geeska Afrika.
Ku saabsan qoraagga buugga:
Cabdulqaadir Cabdulle Diini waa qoraa deggen waddanka Ingiriiska, waana aabbe Toddobo carruur ah. Wuxuu horey u qorey dhowr buug oo ay ka mid yihiin: Ka Joogsada qof yiri “Laa Ilaaha Illallaah”, Tarankii Qurbaha Tagey iyo Hoggaanka iyo Haweenka. Hadda wuxuu ku hawllan yahay sidii uu u soo saari lahaa labo buug oo cusub oo mid ka mid ahi yahay sheeko ku saabsan qiso run ah oo dhacdey.
Markale, si loo badbaadiyo bulshadeenna waxaa wanaagsan in la horumariyo nidaamka waxbarashada dalka ayadoo la horumarinaayo fahanka diinta Islaamka. Waxaan soo jeedin lahaa in iskuulada xittaa lagu dhigo barashada quraanka, fasiraada quraanka, axadiista iyo taariikhda xadaarada Islaamka si qofka raba innuu jaamacad sii aado u fahan sanaado diintiisa waxa ay tahay, waxayna muhiim u tahay in waxyaabo kale aan lagu qaldi karin sida diinta shiicada oo kula sita magaca Islaamka.
Illaa burburkii waxii ka danbeeyey, waxbaa labaranayaa lagumana aflaxo macnaha samaynteeda lagama dareemo hoggaamiyayaasha shacabka, taas waxaa keenaysa aqoonta aan baranno waxaa ka maqan qasdiga, shaqsigu markii iskuul lageeyo madaama uusan arkin loona dhigin diinta Islaamka, wadaniyada, waxaana laabtiisa ka buuxa in aqoontaan lacag kuhelo kaliya, oo reerka hadda dabada kawadana uu wax kasiiyo.
Tankale aqoontaan barano dal iyo dibadba ma’ahan aqoonteenna na anfacaysa, waxaan qiilkaan maangal uga dhigayaa, caalamka dalkasta waxuu leeyahay qaab ama nidaam uu ilmihiisa wax kubaro, qaabkaas waxaa dajiya laan dowladda ka mid ah, hammi iyo yool baana laga leeyahay, waxbarashada qofkana waxaa qaabeynayaa hadafkaas sal-dhigga muqararma looga dhigay.
Looma baahno inaan sharaxaada sii badiyo, balse waxaan doonayaa inaan kuu tilmaamo oo kali inaad wax ka fahanto diinta shiicada waxa ay tahay, waxaana kuu bidhaaminaayo buuggaan SHIICADA CAQIIDADEEDA IYO SOOYAALKEEDII GEESKA AFRIKA.
Tags: Buugga SHIICADA Caqiidadeeda iyo Sooyaalkeedii Geeska Afrika
Next post Talooyin Ku Socda Ardayda Dhammeysay Jaamacadaha?
Previous post Saameynta uu Leeyahay Cudurka Sonkorta